News - Uru na nlezianya maka ịwụnye mita eletrik na onye ntụgharị ugbu a
Uru na nlezianya maka ịwụnye mita eletrik na onye ntụgharị ugbu a
Gini mere eji ghazie iji ihe onodu ihe ntanye? Nke a bụ iji zere ịchụpụ mita na ịchekwa ego. N'ihe banyere ịchekwa ego, ọnụahịa nke obere mita dị ugbu a na onye na-agbanwe ihe ga-adị ala karịa nke nnukwu mita dị ugbu a. Site na nchedo nke mita eletrik, ọ bụrụ na ọnụọgụ nke ugbu a na akaghị aka niile karịrị ogo ndidi nke mita ahụ, mgbe ahụ Ọ ga-emebi. Iji zere ịgba mita ahụ ọkụ, ọ dị mkpa iji wụnye ezigbo mma 11kv ugbu a transformer.
nlekọta maka ịwụnye mita eletrik gụnyere akụkụ ndị a:
1. Lelee tupu echichi
Lelee mita ahụ tupu ịwụnye ya, ọkachasị ịlele ọdịdị nke mita ahụ. Kpachara anya mgbe ị na-elele iji zere ịzụrụ ngwaahịa dị ala. N'ozuzu, mita ndị na-emepụta mgbe niile ga-enwe akara, karịsịa payaa ntị na nke a, iji hụ ma akara ahụ agwụla, na enwere ike ịwụnye ya mgbe ọ gafesịrị ule ahụ.
2. Ebe ntinye
A naghị etinye mita ahụ na aghara aghara n'akụkụ ọnụ ụzọ mbata. O nwekwara ihe ndị a chọrọ maka gburugburu ebe obibi. Ọ kachasị mma ịwụnye ya na ebe tọgbọ chakoo. N'ime ogo 40, iru mmiri enweghị ike ịdị elu karịa 85%, n'otu oge enweghị ike igosipụta ìhè anyanwụ ozugbo, a na-echekwa ịdị elu ya na 1.8m.
3. The nwụnye ọrụ
Mgbe ị na-etinye mita ahụ, ịkwesịrị ịwụnye ya dị ka eserese wiring, jikọọ wires ndị dị n'elu n'otu n'otu, a ghaghị idozi nkedo ọ bụla n'ọnọdụ ya, ịkwesịrị ịnwale mgbe echichi ahụ, ị ​​nwere ike iji ya mgbe ị gafesịrị ule ahụ.
Post oge: Jul-17-2020